Himalaya Dainik » डा. केसीको बिरुद्धमा अनसन बसेेका थापा हतियार सहित पक्राउ परेका अभियुक्त
डा. केसीको बिरुद्धमा अनसन बसेेका थापा हतियार सहित पक्राउ परेका अभियुक्त
चिकित्सा क्षेत्र सुधारको माग गर्दै डा गोविन्द केसी १६औं अनसन बस्न इलाम पुगे। पुस २५ देखि उनले आमरण अनसन थाले। त्यसको दुई दिनपछि एक युवकले पनि इलाम चोक बजारको लाकुरी चौतारामा अनसन थाले।
उनको अनसनको उद्देश्य भने डा केसीलाई काउन्टर दिन रहेको थियो । डा केसीका मागसँग असहमति जनाउने पक्षका लागि विजय थापाको अनसन बलियो बहाना भएको छ। डा केसीसँग विपरीत माग राखेका उनलाई डा केसीविरोधी समूह ‘सेलिब्रिटी’ बनाउन लागिपरेको छ।
डा केसीविरुद्ध अनसन बसेपछि उनको पृष्ठभूमि खोज्दै जाँदा थापा आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न भएको पत्ता लागेको नेपाल लाईभमा समाचार छ ।
थापा नेपाली सेनाका पूर्व जमदार तेजबहादुर थापाका जेठा छोरा हुन्। त्रिवेणी उच्च मावि कटारीमा उनले कक्षा १० सम्म अध्ययन गरे। त्यहीँबाट २०६५ सालमा एसएलसी दिएका उनी अनुत्तीर्ण भए। तर, अहिले उनी स्नातक पढ्दै गरेको भन्ने समाचारसमेत आएका छन्। यसबारे प्रस्ट पार्दै ती शिक्षकले भने, ‘हाम्रो स्कुलबाट चाहिँ एसएलसी पास गरेका होइनन्। अन्तैबाट पास गरेर स्नातक पढेको भए जानकारी भएन।’
त्यसबेलाका धनुषाका एसपी सर्वेन्द्र खनालले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा पक्राउ परेका थापासहित दुवैले सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, उदयपुर र सिन्धुलीमा पार्टी विस्तार गरेर सदरमुकाममा बम विस्फोट गराउने योजना बनाएको स्वीकार गरेका थिए।
कटारीका तत्कालीन डिएसपी किसनसिंह थापाको टोलीले उनलाई पक्राउ गरेको थियो। पछि सार्वजनिक अपराधमा मुद्दा दायर भएर अनुसन्धान सुरु भएको थियो। उनी ०७० असोज १३ गते २८ हजार रुपैयाँ धरौटी बुझाएर छुटेका थिए।
यस्ता आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न तिनै थापा अहिले डा गोविन्द केसीविरुद्ध अनसन बसिरहेका छन्।